Nhengo dzeAnglican Church Dzinopikisa VaKunonga Dzooneswa Ndondo
Gunyana 07, 2011
Chechi yeAnglican mu Harare, kana kuti Church of the Province of Central Africa, CPCA, inoti iri kushushikana zvikuru nekumbunyikidzwa kuri kuitwa vafundisi vayo nemapurisa.
Mashoko echechi iyi anotevera kusungwa neChipiri kwaMufundisi Julius Zimbudzana ve St Mary’s Anglican Church vachipomerwa mhosva yekuba midziyo yechechi inosvika madhora miriyoni nechidimbu kuHighlands.
Izvi zvinoitikawo mushure mekuburitswa mumba yechechi nechisimba kwakaitwa Reverend Farai Kuwanda weku St Aidans ku Chitungwiza, mapurisa achishandisa mutongo wakapiwa nemukuru wevatongi wematare epamusoro, Va Godfrey Chidyausiku, wekuti Bishop Nolbert Kunonga ndivo chete vane simba pazvivakwa zvose zvechechi.
Bishop veCPCA, Va Nicholas Chad Gandiya, vanoti Va Zimbudzana vachakachengetedzwa nemapurisa.
Bishop Gandiya vatiwo manyepo chaiwo ekuti VaZimbudzana vakaba midziyo iyi vachiti iyi inzira iri kushandiswa nemapurisa kubvisa vafundisi ve CPCA mudzimba dzavasaranadzo kuitira kuti VaKunonga vaite pamadiro.
Zvinonzi VaZimbudzana vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare neChina. Nhengo dzeCPCA dzinoti dziri kushamiswa nezviri kuitwa nemapurisa nekuti divi ravo riri kupikisa mutongo waVaChidyausiku mudare repamusoro soro.
Studio7 haina kukwanisa kubata mapurisa kana vedivi raVa Kunonga kuti tinzwe divi ravo.
Asi mutauriri weCPCA muHarare, Va Mike Chingore, vanoti divi ravo riri kushushikana nekusungwa kwaVa Zimbudzana uye kudzingwa zvine chisimba kuri kuitwa nhengo dzavo.